Men in Black: Global Invasion no zava-misy nampitomboina tany am-boalohany | Androidsis
Ny zava-misy marobe dia tonga indray miaraka amin'ny Men in Black: Global Invasion
Men in Black: Global Invasion no filohan'ny franchise MIB miaraka amin'ny zava-misy mitombo ary tonga amin'ny fitaovana finday handika izay efa Pokémon GO, na ilay vao natomboka teny an-tsena miorina amin'ny tontolon'ny Howarts.
Eto isika dia mitovy, na eo aza ny safidy hisafidianana zava-misy miampy amin'ny fakantsary avy amin'ny finday. Izany hoe, amin'ny fotoana rehetra, afaka miala amin'ny fampiasana azy isika ary mandeha mivantana amin'ny vola iray miova arakaraka ny toerana misy azy.
1 Fanandramana tena zava-misy tena lehibe
2 Boaty fandrobana mody mainty ao MIB
3 Manitatra ny faritra
Fanandramana tena zava-misy tena lehibe
Mazava be fa misy orinasa vitsivitsy izay naka an'io tamin'ny finday amin'ny fakana tahaka ny efa mandeha na miasa fotsiny. Raiso ho ohatra i Pokémon GO, iray izay mahazo bebe kokoa amin'ny Android noho ny amin'ny iOS, ary hanome azy io fiovan'ny loko amin'ny skewer dia Men in Black. Ny mety tsy azon'izy ireo dia ny filma fanaovana hetsika hahasarika olona an'arivony maro kokoa; ary raha tsy izany dia hoy izy ireo hatramin'ny farany an'i Harry Potter.
Manomboka ny fototry ny fomba fiasa ary miompana mivantana amin'ny famonoana olona hafa firenena mba hanaovana ny fanangonana anao manokana, ny ady dia entina amin'ny alàlan'ny fanindriana ny bokotra afo rehefa manatona ilay tanjona ny masontsika. Araka ny fahaizantsika amin'ny fanindriana ny bokotra amin'ny fotoana mety, dia hanana fiainana bebe kokoa na latsaka isika.
Mba vitantsika manisy fahasimbana bebe kokoa amin'ilay tifitra, azontsika atao ny manova fitaovam-piadiana amin'ny fivarotana. Ary eo no idiran'ny freemium mba hahazoana lahatsoratra haingana kokoa izay hanatsarantsika ireo ananantsika. Raha lazaina amin'ny teny hafa, ireo boaty fandrobana malaza amin'ny fotony rehetra.
Boaty fandrobana mody mainty ao MIB
Raha ny marina, amin'ny lalao voalohany dia hampianatra antsika izy ireo ahoana avy amin'ny fivarotana no ahafahantsika mahazo fitaovam-piadiana izay manimba bebe kokoa ary ahafahantsika mamono vahiny izay afa-mandositra antsika amin'ny fihodinana voalohany. Avia, mampianatra anao izy ireo fa raha manana paty ianao dia afaka mivoatra haingana kokoa.
Amin'ny ankapobeny dia azonao atao manangona vahiny manodidina ny 40+ avy amin'ny tontolon'ity franchise ity sy ny tsirairay miaraka amin'ny fahaizany manokana. Ohatra iray hafa mazava momba ny maha-izy ireo tany am-boalohany tamin'ny fananganana ny fotony mitovy amin'ireo lalao Niantic Games roa hafa.
Mandeha ihany ny ady rehefa mifandimby sy miditra isika izay hanana ny vahiny mitifitra amin'ny basiny avy amin'ny tontolo hafa. Raha ny tena izy, raha nilalao ireo an'ny Niantic ianao dia ho eo alohan'izy ireo. Eny, eny an-dalambe amin'ny manodidina anao koa dia miandry anao handroso izy ireo.
Manitatra ny faritra
Ny zavatra mahatsikaiky amin'ity raharaha ity dia izany ny radius hiadiana amin'ny vahiny dia avo kokoa noho ny lalao augmented reality hafa. Izany hoe tsy mila mihetsika loatra ianao, ka raha olona kamo ianao ary tsy tianao ny mandeha antoandro dia mety ho lalaonao izany. Mety ho toa adaladala izany, saingy fantatrao izany Harry Potter: Mitambatra ireo mpamosavy afaka mahita iray fotsiny ianao na biby goavam-be roa ao anaty radius play.
ara-teknika tsy maninona, nefa tsy dia misy fireharehana. Nampiasain'izy ireo izany mba hanarahana ny fifanarahana ary navoakan'izy ireo ny gisa tamin'io orinasa io izay nanome azy ireo fotoana ahafahana manao lalao hafa izay nitombo. Tsy afaka manasongadina saika na inona na inona isika, satria ny fitsipi-dalao ity dia ny fanarahana tsara ny singa rehetra ao aminy. Ary io angamba no mahatonga azy mankaleo sy fisaka.
Men in Black: Global Invasion tonga hanandrana hidina amin'ny lamasinina haingam-pandeha de augmented zava-misy, fa mijanona somary lavitra amin'ny hitsambikina izay nianjera tsara. Mila mihoatra ny fanahafana ny fifaninanana fotsiny izany. Araka ny efa nolazainay teo aloha, saika fanompana, ary betsaka kokoa ny avy amin'ny orinasa hafa, raha nitovy tamin'ny Niantic, eny, mety hitranga izany, saingy ity? Tsia, azafady tsia.
Naoty 2.5 kintana
Tsara ny ady
Vata misy entana
Tsy misy zavatra tany am-boalohany
Lehilahy manao akanjo mainty AR: lalao mitombo
Developer: Ny sandan'ny anjara Ludare Group Inc.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Lalao Android » Ny zava-misy marobe dia tonga indray miaraka amin'ny Men in Black: Global Invasion
Fampiarahana amin'ny Facebook: ofisialy ihany ny mpifaninana amin'i Tinder